पेट्रोल-डीजलको दाम स्थिर, कॉंचो तेलको दाममा घट-बढ़ जारी - Hindusthan Samachar Nepali
पेट्रोल-डीजलको दाम स्थिर, कॉंचो तेलको दाममा घट-बढ़ जारी
25 Jan 2022 10:37:52
नयॉं दिल्ली, 25 जनवरी (हि.स.)। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कॉंचो तेलको दाममा घट-बढ़ जारी रहे तापनि सार्वजनिक क्षेत्रका तेल विपणन कम्पनीहरूले गत 82 दिनदेखि दुवै इन्धनहरूको दाममा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। घरेलू बजारमा पेट्रोल-डीजलको दाम स्थिर रहेको छ। दिल्लीमा मंगलवार पेट्रोलको दाम 95.41 रूपियॉंप्रति लिटर र डीजलको दाम 86.67 रूपियॉंप्रति लिटरमा स्थिर रहेको छ।
इण्डियन ओएलको वेबसाइट अनुसार देशका अन्य महानगरहरू मुम्बई, कोलकाता र चेन्नईमा पेट्रोलको दाम क्रमश: 109.98 रूपियॉं, 104.67 रूपियॉं र 101.40 रूपियॉं रहेको छ। यसरी नै यी महानगरहरूमा डीजलको दाम क्रमश: 94.14 रूपियॉं, 89.79 रूपियॉं र 91.43 रूपियॉंमा स्थिर रहेको छ।
उल्लेखनीय छ, संसारभरि कोरोना भाइरसको नयॉं भेरियन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो मामिलाबीच अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कॉंचो तेलको दाममा घट-बढ़ जारी रहेको छ। अमेरिकी बजारमा डब्ल्यूटीआई क्रूडको दाम 83.76 डलरप्रति ब्यारल र ब्रेन्ट क्रूडको दाम 86.89 डलरप्रति ब्यारल पुगेको छ।
उत्तरकाशी, 13 मई (हि.स.)। गोमुख ग्लेशियर पग्लने कारणहरूलाई लिएर वैज्ञानिकहरूको भिन्न-भिन्नै मत हुन स..
नयॉं दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। रूस-यूक्रेन संकटबीच घरेलू बजारमा पेट्रोल र डीजलको दाम स्थिर रहेको छ। अन्..
बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरको पहिलो वेब सिरिज कालेबुङको विभिन्न क्षेत्रहरूमा छांयाकन जारी
कालेबुङ, 12 मई (हि.स.)। बलिउड अभिनेत्री करीना कपूरको वेब सिरिजको सुटिङ अहिले कालेबुङका विभिन्न क्षेत..
नाबालिगमाथि यौन दुर्व्यवहार, आरोपित पक्राउ
गान्तोक, 12 मई (हि.स.)। देन्ताम पुलिस थाना क्षेत्रमा पर्ने एउटा गाउॅंमा एकजना नाबालिगमाथि यौन दुर्व्..